I-Uller Ski - Izikebhe ze-Ski, zelanga nezemidlalo zama-Freeriders
Indoda ye-Ski Goggles
Owesifazane weSki Goggles
Izinto ezi-5 okufanele uzigweme lapho ulungisa futhi uhlanza ibhayisikili lakho
Julayi 27, i-2021
Kubathandi be ukuhamba ngebhayisikile, nokuthi bayasiphika, akukho lutho olungcono kunosuku emgwaqweni ogcwele ukuzijabulisa, indawo engazinzile futhi lapho ufika ekhaya, zinike ukuphumula okufanelekile. Kepha awucabangi ukuthi ukhohlwa okuthile? Njengoba nje ululama ngemuva kosuku lokuwela, kanjalo nebhayisikili lakho. Kungakho namhlanje sikulethele le ndatshana lapho sikukhumbuza izinto ezi-5 okufanele uzibalekele nini kucacile y lungisa ibhayisikili lakho.
Bona isihloko esiphelele
"Amazimuzimu" ... uma kukhona okuthile lokho oslovenia bazi kahle kamhlophe ukuthi imayelana nezintaba nemithambeka. Eqinisweni, lokhu bekuyindawo yokuzalwa komunye wabagibeli bamabhayisikili ababaluleke kakhulu nabachwepheshe ezikhathini zamuva. Esihlokweni sethu namuhla sikutshela izinto eziyi-10 owawungazi neze ngazo UTadej Pogačar, umSlovenia oqambe igama le- ukuhamba ngebhayisikile neSlovenia phezulu emsamo.
Ukuhamba ngebhayisikili ngokungangabazeki ngomunye wemidlalo evusa inkanuko enkulu phakathi kwalabo abawenzayo, kanye nomphakathi obukekayo, abazizwa sengathi yibo uqobo lwabo abahamba ngezinyawo emthambekeni ngaphambi kweMont Ventoux. Uyazi ukuthi sikhuluma ngani? Esihlokweni sanamuhla sizokutshela ngezehlakalo ezibaluleke kakhulu emlandweni we I-Tour de France, lowo mncintiswano nomlando ohlanganisa okuhle kunako konke emhlabeni unyaka nonyaka.
Uma ungumuntu othanda ukuhamba ngebhayisikili nakho konke lokhu okubandakanya lo mdlalo, kungenzeka ukuthi usuvele ulwazi uhambo olubaluleke kakhulu lokuhamba ngebhayisikili eSpain; Inqe Lentshebe. Kuzoba ukusayina kwakho okulandelayo uma ungumlandeli walesi siyalo. Ukuze ufunde kabanzi ngamalukuluku ale mashi, ungaphuthelwa okuthunyelwe kwanamuhla!
IMikhiqizo yeLLER® HIGH TECH YOKWENZA
I-Uller® It is a premium high-performance brand created by and for elite players. Yonke imikhiqizo yethu yenziwe ngaphansi kokuhlangenwe nakho kwabasubathi abasebenza kahle abakhulelisa izidingo zabo emikhiqizweni yethu futhi lezi zenzelwe ukumboza zonke izidingo. Imikhiqizo ihlolwa ibayisa ezingeni eliphakeme kakhulu lokucindezeleka ukuqinisekisa ukuthi izofinyelela okulindelwe ngenkathi isetshenziswa ekusebenzeni kwezemidlalo nobuchwepheshe.
SIYAZWA ISIMEMO, SIKHONZA IZWE
I-Uller® iwumkhiqizo wezinto zokukhanya zezemidlalo ezidalwe ngabathandi bezemidlalo abasezingeni eliphezulu. Ukusebenza okuphezulu kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukusebenza okuhle kakhulu nokuthembeka okuphezulu ezimweni ezinzima kakhulu ngesikhathi semidlalo yezobuchwepheshe.